Toban Arrimood Oo Lagu Gaaro Guur Farxad Leh - iftineducation.com
Toban Arrimood Oo Lagu Gaaro Guur Farxad Leh
iftineducation.com – Sidee lagu gaaraa guur farxad leh? Waa arin aan marar badan IFTIN wax ka qoray Hadaba waxaan eegeynaa mar kale 1o qodob oo guurkaaga ka dhigi kara mid farxadi ku dheehantahay.
1. Waqti kala qaata. In aad wada joogtaan 24 saac caafimaad kuma jiro. Waxaa wanaagsan dhowr saacadood ama dhowr maalmood in aad kala maqnaataan si aad isugu xiistaan. Waqti badan oo la kala maqnaadaa dhinaca kale uu dhaawacaa guurka.
2. Isfahan abuura – Waa in aad isfahantaan, oo qaasatan aad fahantaan dabeecada qofka. Soomaali waxay ku maahmaahdaa “waano abuurisbaa ka horeysay” marka inta aan lays eedeyn waa in lays bartaa oo la fahmaa dabeecada dabiiciga ah ee qofkasta uu leeyahay.
3. Qilaafyada degdeg ku xaliyada – Nabiga (scw) ayaa laga wariyay in uu faray in xalinta qilaadkaga aan la daahin oo isla maalintaas la xaliyo. Hadaba hadalka nabiga (scw) ayaa noogu filan tusaale. Haddii qilaaf dhaco sida ugu degdega badan meel ha loo dhigo.
4. iska iloow wixii la soo dhaafay – Wixii dambiyo ee aad gaysatay iska iloow oo sheeko haka dhigin.
5. Cid perfect ah ma jirto – Bani’aadamka ilaahay uma abuurin in aysan qalad sameyn, sidaa darteed waa in aad ogaataa in xaaskaaga ama saygaagu uusan PERFECT ahayn ee xasuuso in uu yahay baniaadam daciif ah oo habeen iyo maalin qalad geysta.
6. Jaceylkaaga muuji – Tani waa mid aan ku liidano haddii aan nahay Soomaalida. Waa in aan u muujinaa jaceylka iyo mahadnaqa lamaanaheena. Waa in xaaskaaga haddii ay cuntada wax ka qalado aadan cambaareyn balse aad dhahdo “Macaanto aad ayay u macaantahay” waa niyad dhis. Markii ay wax wanaagsan sameysana aad ku amaantaa.
7. Xali dhibaatooyinkaaga. Wixii adiga dhibaato qaas kuu ah waa in aadan ka qeyb galin lamaanahaaga. Inkastoo ay wanaagsantahay in aad u bandhigto haddii ay xalintooda ka qeyb ka qaadan karto.
8. Ha is dhaliilina – Dhaliisha badan waxay abuureysaa kala shaki iyo hoos u dhac xaga maskaxda ah. Xaaskaaga ammaan halkii aad ka dhaliili lahayd.
9. Muranka ha balaarin – Way dhacdaa in labada qof ay wax isku qabsadaan balse ha keenin meesha wixii sanadkoodhan dhacay. Arinta markaas qilaafku ka taaganyahay oo keliya xooga ha la saaro ee yaan la soo qufin qabriyada.
10. Marnaba haka shakinin lamaanahaaga. Shakigu waa bilowga burburka guurkiina.
Cowke gabadhiisa Fanaan ma noqon Cadeen Uu bixiyay Wariyaha
VIDEO:- Xawaaladaha soomaalida ee Australia oo qarka u saaran in la xiro+ WARBIXIN